Umthandazo kuSanta Anthony wokufumana uthando lwenene [+ lomelele]?
Umthandazo kuSan Antonio ukufumana uthando, ukukhangela uthando lwenene yinto egcina abantu abaninzi bexakekile kwaye bexhalabile. Kungenxa yoko le nto amaxesha amaninzi efuna ukwenza a umthandazo kuSan Antonio ukufumana uthando, ukubanceda bayifumane.
Ukuqondwa komntu kubandakanya ukukwazi ukuqala owabo usapho kwaye oku, uninzi, bafuna iqabane ukuba lihambe nabo kuyo yonke inkqubo.
Uthando lwenene luye lwathengiswa kakhulu, kangangokuba linda ixesha elininzi silinde imodeli yoko basithengisa kwiimovie, ezincwadini nasebantwini ngokubanzi.
Kuqala kufuneka siwushiye lo mbono ecaleni, uthando lungasimangalisa ngendlela esicinga kancinci ngayo, ke kufuneka silungiselele kwaye ngentliziyo evulekileyo ukuyifumana xa igqiba ekubeni ifike.
Thandaza Ukufumana uthando lokwenyani kuya kusinceda ukuba silinde ixesha elide njengoko kufuneka kwaye sazi ukuba siluchaze njani.
1 Umthandazo kuSanta Anthony ukufumana uthando Ngaba lomelele?
1.1 Umthandazo wokufumana uthando lwenene
1.2 Umthandazo kuSanta Anthony wasePadua ukufumana uthando
1.3 Umthandazo kuSan Antonio ukufumana uthando lobomi bakho
2 Ndingayithetha emithandazweni emi-3 kuSan Antonio?
Umthandazo kuSanta Anthony ukufumana uthando Ngaba lomelele?
Yomelele kwaye inamandla, ngakumbi ukuba uyenza ngokholo nangokusuka entliziyweni. Ilizwi leNkosi lisifundisa, kwenye yeakhawunti yakhe engenakubalwa yesivumelwano esitsha, ukuba uthando lunokwenza yonke into, lindele yonke into, luyinyamezele kwaye aluze luyekwe.
Ngale ndlela sinokwazi ngokuqinisekileyo ukuba luthando okanye yenye into evakalayo. Abaninzi bathi bayathanda kwaye ixesha liyayeka ukwenza njalo, oku, ngokwelizwi likaThixo, ayikokuziphatha.
Intliziyo iyakhohlisa, ngaphezu kwazo zonke izinto. Iimvakalelo ziyaguquka ngelixa uthando lusisigqibo.
Ukuthandaza kuThixo umdali kwaye simcele ukuba asikhokele ukuze sithathe isigqibo sokuba ngubani ofanelwe luthando lwethu kwaye ngubani ongafanelekanga, kunye nokuchonga ukuba ngubani othathe isigqibo sokusithanda ngenene kubalulekile kuba siyaziphepha iimeko ezinokuba buhlungu.
Khumbula ukuba akukho Umthandazo owenziwe ngokholo ongaphendulwaa.
Kungathatha ixesha okanye impendulo ivela apho sicinga khona kancinci, kodwa kufuneka sibe nokuzithemba kokwazi ukuba uThixo wenza yonke into ngathi kwaye uyazazi iimfuno zethu zokwenyani.
Umthandazo wokufumana uthando lwenene
Thixo wam, Wena, njengomdali, unika ubomi kuzo zonke izidalwa. Wena obona yonke into kwaye wazi yonke into, sukuyeka ukuqondisa amehlo akho ebomini bam kwaye ubone indlela endinokuthi ndiphucule ngayo ukuze ube ngulomntu onokuba nothando lokwenene.
Ukuba isimilo sam asiyiyo eyona ifanelekileyo, ukuba indlela yam yokuphila neyokuhlala ayisiyo-concordes lothando, ndixelele. Ndicela undixelele entliziyweni yam yonke into endifanele ndiyazi ngelizwi lakho. Sondela endlebeni yam kwaye ucebise ngento endifanele ukuyenza. Sukundishiya, usuku nosuku, ndilindele olo thando luqinisekileyo, ngaphandle kokwazi ukuba ndim ndim ekufuneka nditshintshe.
Thixo wamazulu, kuba uphakamile kwaye umangalisayo, ndithembele kuwe. Ndiyazi ukuba ilizwi lakho entliziyweni yam lifana namanzi amsulwa ahamba emlanjeni kwaye acoca yonke into esemendweni. Ndilindele ilizwi lakho kunye nengcebiso yakho yonke. Ndijonge phambili kwimigqumo yenu. Ndifuna ukukwamkela kubunzulu bam. Ndiyazi ukuba ziya kuba zilungile, zilumkile kwaye ziyinyani, zilungele ubomi bothando lwam.
Kuba unjalo Ubulungisa, ubulumko nenyaniso. Thixo wezulu, ndiyakuthembisa ukuba ndiza kusebenzisa iingcebiso zakho zeengcali kwaye ndiya kuhlala ndiyilandela indlela ondiphawule ngayo. Ndikhokele kule ndlela ukuze ndazi eyona ndlela ndimele ndiyilandele, njalo ngokwemithetho yakho yothando. Ndiyathandaza ukuba iqabane lam elizayo lihlale lihlonipha kwaye lindithanda ngaphandle kwemeko kwaye lindikhethe ngaphezu kwabo bonke abanye.
Lo mthandazo kufuneka wenziwe ushiya bucala izinto esizikhethayo, kufuneka sicinge ngokubaluleke ngakumbi kuneemvakalelo, into eza kuhlala iminyaka.
Uthando lunokufezekiswa naphi na kodwa uthando lwenene luyakhiwa ngemini. Kungumsebenzi weqela esinokuthembela kuwo ngoncedo loMenzi wazo zonke izinto.
Ukuba kunokwenzeka ukufezekisa uthando lokwenyani kwaye ukuba siyawathemba amandla omthandazo amathuba makhulu ngakumbi. Thandaza usebenzisa amazwi ethu kwaye ulinde impendulo.
Umthandazo kuSanta Anthony wasePadua ukufumana uthando
Usikelelekile uAnthony Anthony, olungileyo kubo bonke abo bangcwele, uthando lwakho ngoThixo kunye nothando lwakho ngezidalwa zakhe zikwenze wakufanelekela ukuba namandla.
Ngamazwi akho ubancede abo baneengxaki okanye amaxhala kunye nemimangaliso eyenzekileyo ngokubakho kwakho. Ndikubongoza ukuba undifakele ... (Chaza isicelo sakho).
Ubumnene kunye nesithandwa esithandekayo, ngentliziyo yakho ihlala igcwele imfesane yabantu, khawucele isicelo sam kuMntwana omnandi uYesu, owayekuthanda ukuba sezandleni zakho, kwaye wamkele ngonaphakade umbulelo wentliziyo yam. (Thandaza abazali bethu abathathu kunye nooMathathu abaDumileyo.)
U-Anthony Anthony wasePadua ngoyingcwele ekufuneka sithandaze kuye ukuze sifumane uthando lwenene. Unokukunceda ufumane uthando, umntu ophila naye, elinye icala, ubomi bakho buxhomekeke.
Ngomnye umntu owenzelwe wena, ungathandabuzi ukuba kunjalo.
Imithandazo inamandla kwaye isinceda ukuba sikhokele ngokufanelekileyo amandla ukuze singawi ekuphelekeni okanye kwimpazamo yokukholelwa ukufumana uthando apho kungekho.
Umthandazo kuSan Antonio ukufumana uthando lobomi bakho
Saint Anthony, ozukileyo kwaye waziwa ngemimangaliso yakho, ndinike i-Nceba kaThixo yokufezekisa umnqweno wam (fumana iqabane).
Kuba unenceba kuboni njengam, ungazijongi iimpazamo zam, cinga ubuqaqawuli bukaThixo ukuze uzixolele iziphoso zam, undinike isicelo endinamandla kuwe. Ozukileyo wase-Anthony Anthony weMimangaliso, intuthuzelo yoxhwalekileyo, ndicela uncedo lwakho emadolweni akho kwaye ube nguMkhokeli wam. Ndize kuwe ngesicelo kwaye oku kuyayikhulula intliziyo yam yoxhwalekileyo nombulelo.
Yamkela iminikelo yam yokuzinikela nothando kuwe. Ndivuselela isithembiso sam sokuphila ngokukuthanda, Saint Anthony, Thixo nommelwane wam.
Ndisikelele ngesicelo sam, undinike ububele bokungena eBukumkanini bamazulu ngenye imini, ukuze ndikwazi ukucula iinceba zeNkosi ngonaphakade.
U-Sn Antonio uya kumamela kwaye akuncede kuyo yonke le nkqubo ukuze ufumane uthando lobomi bakho.
Nje ukuba uyifumane, ungaqhubeka nokumcela ukuba aqhubeke ekhokela amanyathelo akhe kunye nezigqibo zakhe ngalo lonke ixesha.
Umthandazo unamandla, yiba nokholo kunye nethemba lokuba uyakuphumla.
Ndingayithetha emithandazweni emi-3 kuSan Antonio?
Ngaba ufuna ukuthandaza ngaphezu komthandazo wokufumana uthando lwenene?
Ngaba kufanelekile kwaye uthandaze kuyo yonke imithandazo ngaphandle kokuthintelwa. Banokuthandazelwa bonke ngaphandle kwengxaki.
Khumbula ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba nokholo oluninzi kuThixo nakw iSan Antonio.
Ngale ndlela uya kufumana olona ncedo luphakamileyo lokufumana uthando lwakho.